ဘုန်းကျော်: ပိတ်လေငတ်လေမို့ ဖွင့်ပေးကြပါ
ဒါပေမဲ့လည်း ဖေါက်ချင်တဲ့အချိန် ဖေါက်နိုင်တဲ့အတွက်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ့ကောင်းကျိုးကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေး
တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ လက်ခံရပါမယ်။
သူ့လိုပဲ လီးပဲ လို့ ပြန်ဆဲရလိမ့်မယ်။
အစိုးရကလည်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ဖွင့်ပေးအောင်ကျိုးစားနေတဲ့လူတွေအားလုံးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကူညီသင့်တယ်။ Only one way, must be free all political prisoner, sanction will be free also..NLD and Daw Su unable to help, Mr Phone kyaw!!!
ဘလော့ဂ်လုပ်ပြီး ဆဲချင်ရာဆဲ၊ မူးနေလဲ စာရေးတတ်တဲ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဒီကောင်တယောက်အတွက်နဲ့ မြန်မာ့သိက္ခာမကျရလေ
အကြောင်းက ဒီကောင့်မှာ ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဓါတ်လေး
အကျိုးအကြောင်းနဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားပေါ် အခြေမခံပဲ
စိတ်ဆန္ဒအတိုင်း လိုရာဆွဲရေးတဲ့ မလေးရှားအဖွဲ့အစည်းကိစ္စကို ဒီကောင် တောင်းပန်သင့်ပါတယ်။
အစိုးရရော အတိုက်အခံရော လီးပဲလို့ဆဲတဲ့ကောင်မို့
လို့ ဟေ့ကောင်ဘုန်းကျော် မင်းလဲ လီးပဲကွာ။
ကြိုပြီးကြော်ငြာထားတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ အဝေမတည့်မှုများ ကို ဒီကောင်ဘာတွေ ရေးလာဦးမလဲ
ဟေ့ကောင် ဟုတ်ရင်ဟုတ်၊ မဟုတ်ရင်တော့ မင်းမလွယ်ဘူးမှတ်။
ကြားလား... ဟေ့ကောင်။ ရူးသလိုပေါသလိုမလုပ်နဲ့။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ထားတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံကတချို့ လုပ်ငန်တွေ လာပြီးလုပ်ကိုင်နေတာကို ကြည့်ရင်တော့ အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါ ။ အမြတ်များရင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ထားတဲ့ ဥပဒေ ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျော်လွှားပြီးလာကြရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။(ဥပမာ တိုလ်တယ် ရှမ်ဂီလာ ဒေ၀ူး )နဲ့တခြားEU ကနေလာလုပ်နေတာတွေ၇ှိပါတယ်။ အမြတ်မရှိ၇င်တော့ ဘယ်နိူင်ငံမှာလာမှာမဟုတ်ဘူးး ကိုဘုန်းကျော် ထောက်ပြတဲ့ ပက်စီမြန်မာပြည်ကပြန်သွားတယ်။စက်ရုံ ကား နဲ့ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကို ပက်စီတွေဖြန့်တဲ့ ဇက်သင်္ဘော ၂ စီးစတာတွေကို နိူင်ငံသားလက်ထဲကိုဈေးပေါပေါနဲ့ ထားရစ်ခဲ့တယ်။။နောက်ည ပိုင်ရှင်းက ဘာကြောင့် လက်ရှိအလုပ်သမားတွေကို ဘာကြောင့်ဆက်အလုပ်မပေးနိူင်တာလဲ??? မနက်မိုးလင်းကနေ နေ၀င်ထိလုပ်နေတာတောင် ထမင်းငတ်နေတာ လူတွေကို ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်အားခမပေးလို့ ပါ၊ ပြည်းတွင်းမှာစစ်အစိုးရက လူတွေကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ တယ်စကားလုံးကို အသုံးချပြီး လူထုကို NLD နဲ့ ရန်တိုက်ပေးနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေ ၁ ခုချပြမယ်။။။ရခိုင်မှာ မိုး/ဇလ လက်အောင်ခံဌာန ကအသုံးပြုနေတဲ့ မုန်တိုင်းအာရုံခံေ၇ဒါစခန်းမှာရှိတဲ့ေ၇ဒါကပျက်တော့ အဆင့်ဆင့်တင်ပြပြီးပြင်ခိုင်းတယ်။ အစို၇တာဝန်ရှိ ၀န်ကြီးလာတော့ တိုက်ရိုက်ပြောတော့ ၀န်ကြီးက ဒီလိုဖြေတယ် " ကျတော်တို့ ဝယ်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ပိုက်ဆံလည်းရှိတယ်(သန်းေ၇ွှက ပြည်သူအတွက် ဆို၇င်ဘယ်လောက်ကုန်ကုန်ဝယ်လို့ အမိန့်ပေးတယ်တဲ့ )ဒါပေ့မယ် ကုလားမ တို့ လုပ်လို့ ကုမဏီကမေ၇ာင်း၇ဲဘူး ၊ ကုလားမဆိုဘယ်သူလဲ သိလာလို့ တောင်မေးလိုက်သေးတယ်။ အဲဒီအဖြင့်ကို တကယ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့တယ်၊ မိုး/ဇလ ညွန်းချုပ်(ဟောင်း)ဦးထွန်းလွင် တလောက အင်းထာဗျူးမှာထည့်ပြောသွားလို့ အဖြစ်မှန်ကို သိလိုက်ပါတယ်။ ၀ယ်ဖို့ မကြိုးစားပါ ။ ကမ္ဘာ့ မိုလေ၀သ အဖွဲ့ ဆီမှာ အလှူခံပါသတဲ့ ။။။အလှူဆိုတော့ လှူခြင်း၇င်ရမယ် မလှူခြင်း၇င်မ၇ဘူးပေါ့..... စီးပွားေ၇းပိတ်ဆို့ မူအလုံးဆုံးဟာ nld နဲ ဒေါ်စုကို ဆန္ဒာပြတာနဲ့ မရပါဘူးးးးပိတ်တဲ့ နိူင်ငံတွေကဒါတွေ့ ကြောင့်လို့ တိုက်၇ိုက်ပြောဆိုတာတွေကို လေ့လာပြီး ပြင်သင့်တာကို ပြင်လိုက်ရင် ပွင့်ပြီး ပြင်နိူင်တဲ့ လူတွေ ဘယ်သူလဲဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ်
မှတ်ချက်....ဘုန်ကျော်ကိုဖားခြင်းမဟုတ်ပါ။။။။မလေးရှားက အဖွဲ့ ကိစ္စတောင်းပန်းသင့်တယ်လို့ ရေးတဲ့ ဘော်ဒါ ဘုန်းကျော်ေ၇းတာနည်းပါသေးတယ်းးးးးအဖွဲ့ တွေ အားလုံး ၀ါး ကြပါတယ်... ပညာရှိနည်းနဲ့ ဝါးတာနဲ့ ပညာမဲ့နည်နဲ့ ဝါး တာ ဒါပဲကွာပါတယ်။။။။။မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာသိလို့ အစလေးဆွဲပြလိုက်မယ်။။။။လူနာတွေဆေးရုံတတ်တဲ့ ကုန်ကျစ၇ိတ်ကို ကနေဒါက ပေးတော့ မင်းတို့ နဲ့ နောက် ၁ဖွဲ့ ဝါးတာပေါ်သွားလို့ မရတော့ဘူး မဟုတ်လာ?????